ShweMinThar: September 2018
ကျွန်တော် ဒီနေ့ မှာ time-lapse photography ရုိုက်ပုံရုိုက်နည်းနဲ့ မရုိုက်ခင် ကြိုတင် သိထားသင့်တဲ့ ဗဟုသုတလေးတွေကုို ရေးပေးချင်ပါတယ်။
time-lapse ရုိုက်ပြီးရင် တစ်ခါတည်း edit လုပ်ပြီး video လုပ်နည်းပါတစ်ဆက်တည်း ရေးပေးပါမယ်။
Beginner တွေအတွက် Time-lapse Photography ကုို အစအဆုံး ကုိုယ့်ဘာသာ ဖန်တီးတတ်သွားအောင်ပါ။
ကျွန်တော်တုို့ online ပေါ်မှာ လှလုိုက်တာ မုိုက်တယ်ကွာ ဆုိုပြီး ကြည့်ကြည့်နေတဲ့ time-lapse တွေက ဗီဒီယုိုတွေ ဖြစ်နေပါလျှက်နဲ့ဘာလုို့ photography ဖြစ်နေရသလဲဆုိုတာကို အရင်ရှင်းပြပါမယ်။
time-lapse ဟာ ကာလအတုိုင်းအတာ တစ်ခုအထိ subject တစ်ခုခု၊ background တစ်ခုခုကုို (အဲ့ တစ်ခုခုဟာ ရွှေ့လျှား (သုို့မဟုတ်) လှုပ်ရှားနေရပါမယ်) ရုပ်သေ ဓါတ်ပုံတွေ ပုံပေါင်းများစွာ တစ်ဆက်တည်းရုိုက်ပြီး အဲ့ဒီ ရာထောင်ချီတဲ့ ဓါတ်ပုံတွေကို တစ်စက္ကန့်ကုို ပုံပေါင်း ၂၄ / ၂၅ / ၃၀ / ၆၀ စသဖြင့် ဆက်စပ်ပြီး ပြသလုိုက်တဲ့ အခါ ဓါတ်ပုံတွေက လှုပ်ရှားလာသလုိုထင်ရပြီး ဗီဒီယုိုတစ်ခုလုို ဖြစ်လာတာပါ။
ဒါဟာ ရုပ်ရှင်တွေရဲ့အခြေခံ နည်းပညာနဲ့တူပါတယ်။
ဒါဆုို အဲ့လုို ဓါတ်ပုံတွေ မြောက်မြားစွာ ရုိုက်ပြီး ဗီဒီယုို ပြုလုပ်မယ့်အစား တစ်ခါတည်း ဗီဒီယုိုရုိုက်ပြီး အမြန်ရစ်ပြလုိုက်ရင်ရောလုို့မေးစရာရှိပါတယ်။
ဒါလည်း ဖြစ်နုိုင်ပါတယ် ဒါပေမယ့် ဗီဒီယုိုတစ်ခုရဲ့ရုပ်ထွက် ကွာလတီနဲ့သူတုို့ရဲ့ storage နေရာယူမှုတွေကြောင့် time-lapse လုို နာရီ၊ ရက်တွေ၊ လတွေ၊ နှစ်တွေချီပြီး တစ်ဆက်တည်း ရုိုက်ကူးဖုို့ဆုိုတာ မဖြစ်နုိုင်ပါဘူး။
time-lapse မှာ သစ်ပင်တစ်ခု အစေ့ကနေ ပေါက်ဖွားကြီးပြင်းလာတာ၊ ကြက်ဥကနေ အကောင်ပေါက်လာတာ၊ ပန်းသီးတစ်လုံး အကောင်းကနေ ပုတ်သိုးသွားတာ၊ ပင်လယ်ထဲမှာ လတွေချီ ခရီးသွားတာ၊ အဆောက်အဦတစ်ခု အုတ်မြစ်ကနေ လုံးဝပြီးစီးသွားတဲ့အထိ ပြောင်းလဲပုံအဆင့်ဆင့်၊ နေဝင် နေထွက်ချိန်တွေ၊ ကြယ်တွေ ရွှေ့လျားသွားလာတာ ... စသဖြင့် အများကြီး အများကြီးကုို မိမိ ဖန်တီးနိုင်သလုို စိတ်ကူးရှိသလုို ရုိုက်ကူးဖန်တီးလုို့ရပါတယ်။ အဲ့လုို အချိန်ကာလ အကြာကြီးရဲ့ပြောင်းလဲပုံကုို လှလှပပ ပုံဖော်ပြသချင်ရင်တော့ time-lapse က အကောင်းဆုံးဖြစ်နေဦးမှာပါ။
*** Time-lapse ရိုက်ဖုို့ အတွက် လုိုအပ်တာတွေကတော့
1) မပါမဖြစ် ကင်မရာပေါ့ (DSLR/ Mirrorless/ compact camera/ smart phone အဆင်ပြေတာနဲ့ရိုက်နုိုင်ပါတယ်။ DSLR နဲ့ Mirrorless ကတော့ ဦးစားပေးပါ။)
2) time-lapse ရုိုက်ဖုို့အတွက် field of view ကျယ်ကျယ်ရတဲ့ wide angle lens တွေလည်းလုိုအပ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် background တွေ foreground တွေက ရှုပ်ထွေးနေတယ် dead space တွေများနေတယ်ဆုိုရင်တော့ zoom lens တွေကို အသုံးပြုပြီး subject တစ်ခုခုကုို ဦးစားပေး ရုိုက်ကူးသင့်ပါတယ်။
3) ထုံးစံအတုိုင်း လုိုအပ်မှာက tripod တောင့်တောင့်တစ်ခုပါ။ နာရီနဲ့ ချီပြီး တစ်ခါတစ်ရံလေတုိုက်နေတဲ့ အခြေအနေတွေမှာလည်း အသုံးပြုရမှာမုို့ အချိန်ပြည့် မလှုပ်မရှားပဲရုိုက်ကူးနုိုင်အောင် တောင့်တင်းခုိုင်မာတဲ့ tripod ကောင်းကောင်းတစ်ခု လုိုအပ်ပါတယ်။
4) Intervalometer ပါဝင်တဲ့ shutter remote cable တစ်ခု၊ battery အားကုန်သွားတဲ့ ပြဿနာကင်းအောင် wireless ထက် cable ကုို ပိုဦးစားပေးပါတယ်။ (တစ်ချို့ကင်မရာတွေမှာလည်း Intervalometer built in ပါပြီးသားဖြစ်တယ်ဆုိုရင်လည်း Intervalometer cable မယူခဲ့လည်း ရပါတယ်။) ကျွန်တော့ကင်မရာမှာတော့ interval timer shooting ပါဝင်တဲ့အတွက် အဲ့တာနဲ့ပဲရုိုက်ကူး ပြသပါမယ်။
5) ပြီးရင် အားအပြည့်သွင်းထားတဲ့ battery နဲ့ storage များပြီး writer speed မြန်တဲ့ memory card လုိုပါမယ်။ အဲ့တာက ရုိုက်တဲ့အပိုင်းရောက်ရင် ကျွန်တော် ထပ်ရှင်းပြပေးပါမယ်။ တကယ်လုို့ battery grip နဲ့ဆုိုရင်လည်း အဆင်ပြေပါတယ်။
ခုကတော့ ဒါလောက်ပါပဲ။ တခြားတော့ ထူးထူးထွေထွေ မလုိုပါဘူး ပုံမှန် ကိုယ်သုံးနေကျ ဟာတွေပဲပေါ့။
filter တွေနဲ့ရုိုက်ချင်တယ်ဆုိုရင်တော့ filter တွေ ယူခဲ့ပေါ့နော်။
အုိုကေ….! Time-lapse အတွက် gear တွေရပြီဆိုတော့ မရုိုက်ခင် ကြိုသိထားသင့်တာတွေကုိုအရင်ရှင်းပြပါမယ်။
1) ဘယ်လောက် မိမိနစ်ကြာကြာ time-lapse ဗီဒီယုိုလုိုချင်တာလဲ
2) မိမိဘယ်လောက် မိနစ်ကြာကြာ ရုိုက်ချင်တာလဲ
3)ဘယ်လောက် မိနစ်ကြာကြာ မိမိရုိုက်ကူးမယ့်နေရာက အချိန်ရမှာလဲ စတာတွေကုို ကြိုတွေးထား သိထားဖုို့လုိုပါတယ်။
time-lapse မှာ အချိန်တွက်ရင် interval time က အရေးကြီးပါတယ်။ interval time ဆုိုတာက လွယ်လွယ်ပြောရရင် ဓါတ်ပုံတစ်ပုံနဲ့တစ်ပုံကြား ဘယ်လောက် အချိန်ခြား ရုိုက်ကူးမှာလဲပေါ့။
အဲ့တာ မပြောခင် frame per second (fps) အကြောင်းအရင်ပြောရအောင်ဗျာ။
fps က မိတ်ဆွေတုို့အကုန်ကြားဖူးမှာပါ။ ကင်မရာ ဝယ်ရင် ဆိုင်မှာ ဒါ ဘယ်လောက် fps ရလဲ ဘာညာမေးဖူးမှာပါ။ တစ်စက္ကန့်အတွင်းမှာ အမြန်ဆုံး ဓါတ်ပုံဘယ်နှစ်ပုံရုိုက်နုိုင်လဲဆုိုတာကုိုပေါ့။5fps, 10 fps, 12 fps စသဖြင့်သိပြီးကြမှာပါ။
time-lapse မှာကျတော့ fps က တစ်စက္ကန့်အတွင်းမှာ ဓါတ်ပုံဘယ်နှစ်ပုံပြမှာလဲကုို ဆုိုလုိုပါတယ်။ cinematic film တွေမှာ 24 fps ကုို standard အနေနဲ့ထားပါတယ်။ တစ်ချို့နုိုင်ငံတွေကျ 30 fps က standard ပါ။ time-lapse ကိုတော့ အနည်းဆုံးတော့ 24 fps လောက်တော့ ပြထားသင့်ပါတယ်။ fps များလေ ဗီဒီယုိုက ကြည့်ရတာ ပုိုအဆင်ပြေလေပါပဲ။ ဒါပေမယ့် fps များလေ မိတ်ဆွေရုိုက်ကူးရမယ့် ဓါတ်ပုံအရေအတွက်လည်း များလာလေပါပဲ။ ဓါတ်ပုံပုိုများလာရင် ရုိုက်ကူးရမယ့် အချိန်ပုိုများလာမယ်ပေ့ါလေ။
1) ဥပမာ မိတ်ဆွေက 24 fps နဲ့ ၁၀ စက္ကန့်စာ time-lapse တစ်ခု ရုိုက်ကူးမယ်ပဲထားပါတော့။ ဒါဆုိုရင် 10 second x 24 fps = 240 photos ပါ။ ၁၀ စက္ကန့်စာအတွက် မိတ်ဆွေလုိုအပ်မယ့် ဓါတ်ပုံက 240 ဆုိုရင်ရပါပြီ။ တကယ်လုို့ ၁၀ စက္ကန့်ကုိုပဲ 60 fps နဲ့ထားချင်တယ်ဆုို မိတ်ဆွေလုိုအပ်မယ့် ဓါတ်ပုံက 600 ဖြစ်သွားပါမယ်။ ဒီသဘောပါ..။ အဲ့ဒီတော့ မိတ်ဆွေက အရင်ဆုံး အချိန်ဘယ်လောက်ကြာကြာရုိုက်နုိုင်မှာလဲ ဒါမှမဟုတ် အချိန်ဘယ်လောက်ကြာကြာ ဗီဒီယုိုကို လုိုချင်တာလည်းရယ် ဘယ်လောက် fps နဲ့ဗီဒီယုို ပြုလုပ်မှာလဲကုို အရင်စဉ်းစားထားရပါမယ်။
2) တစ်ခါတစ်လေ ကုိုယ်က အချိန်တွေအရမ်းပုိုနေတယ်။ အေးအေးဆေးဆေး ကော်ဖီသောက်ရင်း စာအုပ်လေးဖတ်ရင်း time-lapse ရုိုက်ချင်တယ်ဆုိုရင်တော့ လွယ်ပါတယ်။ ကုိုယ်ကြိုက်တဲ့နေရာမှာ tripod ချ composition ယူပြီး exposure ချိန်ကြည့်ပါ။ စမ်းရုိုက်ကြည့်ပါ။ စိတ်တုိုင်းကျပြီဆုိုရင် interval time ကုို အောက်မှာ ရေးပေးထားတဲ့အချိန်တွေထဲက သင့်တော်တာတစ်ခုခုကို ယူသုံးပြီး photo count ကုို infinity မှာထား၍ camera battery မကုန်မချင်း၊ memory card မပြည့်မချင်း၊ ဒါမှမဟုတ် မိမိဖတ်နေတဲ့ စာအုပ်မပြီးမချင်း :P ရုိုက်ပေးနေပြီး၊ ပြီးသွားမှ ရလာသမျှဓါတ်ပုံတွေကုို ကွန်ပျူတာထဲထည့် edit လုပ်ပြီး မိမိထားချင်တဲ့ fps နဲ့ time-lapse video လုပ်လုိုက်ရင် သူရချင်တဲ့ ကြာချိန်ရလာမှာပါ။
3) တကယ်လုို့မိမိရုိုက်ကူုးမယ့်နေရာက ၁၅ မိနစ်ပဲအချိန်ရမယ်ဆုိုရင် ဒါကတော့ အတွက်အချက်တွေ လုိုလာပါပြီ။
၁၅ မိနစ်စာ ရုိုက်ကူးခွင့်ရမယ့် အချိန်အတွက် 24 fps နဲ့ပြုလုပ်ချင်တာဆုိုရင်၊ ပြီးတော့ interval time ကလည်3းseconds နဲ့ရုိုက်ရမယ်ဆုိုရင်….
** 15 minutes x 60 seconds = 900 seconds
** 900 seconds ÷3seconds interval = 300 photos
** 300 photos ÷ 24 fps = 12.5 seconds video ကြာချိန်ရလာပါမယ်။
တကယ်က ဘာလုို့လုိုက်တွက်ပြနေတာလဲ မသိဘူးနော်။ ၁၅ မိနစ်စာ အချိန်ကြည့်ရုိုက်။ ရချင်သလောက်ပုံရလာမယ်။ ရလာသလောက်ပုံကုို လုပ်ချင်တဲ့ fps နဲ့လုပ်လုိုက်၊ ရချင်တဲ့ ဗီဒီယုိုကြာချိန်ရလာမှာပဲကုို …. :P
*** အခြေအနေအလုိုက် ခြုံငုံပြီး Interval time ကုို ထားသင့်တဲ့ အချိန်များ (tips ပါ အတိအကျမဟုတ်ပါ)
• လမ်းမပေါ်မှာ လူတွေ ပုံမှန်တုိုင်း လမ်းလျှောက်နေကြတာဆုို ၂ စက္ကန့်ခန့်
• တိမ်တွေ အရမ်းမြန်မြန်သွားနေတယ်ဆုို ၃ စက္ကန့်ခန့်
• တိမ်တွေ သိပ်လည်းမနှေး၊ သိပ်လည်းမမြန်တဲ့ အခြေအနေမှာဆုို ၅ စက္ကန့်ခန့်
• တိမ်တွေ ခပ်ဖြည်းဖြည်းသွားနေတဲ့အခြေအနေမှာဆုို ၁၀ စက္က္ကန့်ခန့်
• နေသွားရာ လမ်းကြောင်းကို ရုိုက်ချင်တာဆုို ၃၀ ~ ၆၀ စက္ကန့်ခန့်
• ညမှာ ကြယ်တွေ လာတွေ သွားရာ လမ်းကြောင်းကို ရုိုက်ချင်တာဆုို ၂၀ ~ ၄၅ စက္ကန့်ခန့်
စသဖြင့် အဆင်ပြေသလုို ထားပြီးရိုက်ကူးနုိုင်ပါတယ်။
*** Time-lapse စတင်ရုိုက်ကူးရန်
1) Composition ရှာပြီး အစမ်းရုိုက်ကြည့်ပါ။
ထုံးစံအတိုင်း tripod ထောက်၊ ကင်မရာတင်ပြီး စိတ်ကြိုက် composition ရှာပါ။ compositon ရပြီဆုိုရင် အစမ်း ၁ ပုံ၊ ၂ ပုံအရင်ရုိုက်ကြည့်ပါ။ မလုိုတာတွေ ပါနေမလား၊ ကုိုယ်လုိုချင်တဲ့ field of view ရမရ၊ ပြီးရင် အလင်းအမှောင်ကိုလည်း Histogram မှာ စစ်ကြည့်ပါ။ time-lapse စရုိုက်ပြီဆုိုရင် ပထမဆုံး ပုံအတုိုင်း အကုန်က ထပ်တူထွက်လာမှာမုို့ နောက်မှ စိတ်တုိုင်းမကျ ဖြစ်ခဲ့ရင် ပေးလုိုက်ရတဲ့ အချိန်တွေ shutter count တွေ နှမြောဖုို့ကောင်းပါတယ်။ အကြမ်းအားဖြင့် depth of field များများရအောင် Aperture ကုို f8 to f16 လောက်နဲ့ ရုိုက်သင့်ပါတယ်။ ညဘက်ဆုိုရင်တော့ အသုံးပြုထားတဲ့ lens ပေါ်မူတည်ပြီး f2.8 to f4 ~ f8 လောက်ပေါ့။ ပြီးတော့ time-lapse လုပ်တဲ့အခါ ပုံတွေမှာ motion ပုို smooth ဖြစ်အောင် shutter speed ကုို 1/30th ~ 1/60thဝန်းကျင်လောက်သာ ထားသင့်ပါတယ်။ ဒါက tips ပေးတဲ့သဘောပါ။ မိမိဘာသာ အဆင်ပြေသလုို ရုိုက်ကူးနုိုင်ပါတယ်။
2) Manual Mode (M) or Aperture Priority (A / AV) နဲ့ရိုက်ပါ။
Time-Lapse ကုိုလည်း Manual Mode နဲ့ သာဦးစားပေးရုိုက်ကူးသင့်ပါတယ်။ ဘာလုို့ M နဲ့ရုိုက်လည်းဆုိုတာ အများကြီးလည်း ရေးပေးဖူးပြီးသားဆုိုတော့ အကျယ်ချဲ့မရှင်းပြတော့ပါဘူး။ ပုံတုိုင်းမှာ တူညီတဲ့ exposure နဲု့ဆုို post-production လုပ်တဲ့အပိုင်းမှာ အဆင်ပြေသလုို ကြည့်ရတာလည်း ပုိုချောမွေ့စေမှာပါ။ သုို့ပေမယ့် ထည့်သွင်းစဉ်းစားစရာရှိပါသေးတယ်။ Manual နဲ့ က အလင်းအမှောင် ငြိမ်နေတဲ့ မှန်နေတဲ့ နေ့လည်ခင်းလုို အခြေအနေမျိုးတွေနဲ့ဆုို သင့်တော်ပါတယ်။ သုို့ပေမယ့် နေဝင်ချိန် နေထွက်ချိန်လုို၊ day to night / night to day လုို
အလင်းအမှောင် သိသိသာသာ ပြောင်းလဲသွားတာမျိုး တွေမှာဆုိုရင်တော့ beginner တွေအနေနဲ့ Aperture Priority mode နဲ့ရုိုက်ကူးတာ ပုိုအဆင်ပြေမှာပါ။ သူက Aperture, ISO ကုို အသေထိန်းထားပေးပြီး shutter speed ကုို အတင်အချလုပ်ပေးမှာမုို့ ပုံတုိုင်း exposure မှန်နေစေဖုို့ အထောက်အကူပြုပါလိမ့်မယ်။ ကျွမ်းကျင် နားလည်သွားပြီဆုိုရင်တော့ Manual mode နဲ့ပဲကိုယ်တုိုင် ပြင်ပ အခြေအနေကုို ကြည့်ပြီး exposure ကုိုယ်တုိုင်ထိန်းကာ ရုိုက်ကူးလုို့ရပါတယ်။
Shutter Priority နဲ့တော့ မရုိုက်သင့်ပါဘူး။ သူက shutter အသေထားရင် exposure မှန်ဖို့ aperture ကုို အကျဉ်းအကျယ် လုိုက်လုပ်နေမှာဆုိုတော့ depth of field တွေလွဲပြီး timelapse video ထဲမှာ တလွဲပုံတွေ ဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်။
3) White Balance ကုို Auto မထားပဲ တစ်ခုခု သတ်မှတ်ပေးထားပါ။
ကျွန်တော် ပုံမှန်အားဖြင့် White Balance ကုို Auto နဲ့ထားရုိုက်ဖုို့ပြောလေ့ရှိပေမယ့် ဒီနေရာမှာတော့ white balance ကုို daylight လုို cloudy လုို ပြင်ပအခြေအနေနဲ့သက်ဆုိုင်တဲ့ mode တစ်ခုခုမှာထားသင့်ပါတယ်။ w-b ကုို auto ထားခဲ့မယ်ဆုိုရင် သူက ပြင်ပ အလင်းရောင်ကုို တွက်ချက်ပြီး လိုက်ပြောင်းပေးနေမှာမုို့ ပုံတွေမှာ မတူညီတဲ့ w-b တွေနဲ့ဆုို edit ပြန်လုပ်တဲ့အချိန် အလုပ်ပုိုသလုို jpeg နဲ့ရုိုက်လေ့ရှိသူဆုိုရင်တော့ သွားပြီပေ့ါလေ။
4) Raw or Jpeg ?
မိမိက အလွယ်တကူ လေ့ကျင့် လေ့လာ၊ စမ်းသပ်တဲ့ သဘောမျိုးရုိုက်ကူးချင်တာ၊ edit လည်း သိပ်မလုပ်ချင်တာ၊ ဒါမှမဟုတ် memory card storage နည်းနေတာဆိုရင်တော့ jpeg နဲ့သာ ရုိုက်ကူးပြီး၊ တခြားအခြေအနေတွေဆုိုရင်တော့ Raw နဲ့ပဲ ရုိုက်ကူးသင့်ပါတယ်။ ဘာလုို့လဲ ထပ်မရှင်းတော့ပါ။
5) Auto Focus နဲ့ Stabilizer (VR, IS) ကုို off ပေးထားပါ။
Composition ရပြီး စိတ်တုိုင်းကျပြီဆုိုရင် auto focus ကုို manual ပြောင်းထားပါ။ ဒါက ရုိုက်ကူးနေရင်း focus out သွားမယ့် အခြေအနေကုို ကာကွယ်ဖုို့ပါ။ ပြီးရင် lens stabilizer ကုိုလည်း off ပေးထားပါ။ tripod ပေါ်တင်ထားပြီးသားမုို့ stabilization လုိုက်လုပ်ပေးဖုို့မလုိုတော့သလုို။ တခါတစ်ရံ stabilizer ကုိုယ်တုိုင်က လှုပ်ရှားမှုကုို ဖြစ်စေတတ်တာမို့ပါ။
6) Battery နဲ့ memory card
ရုိုက်ကူးနေရင် ပုံတွေ အကုန်မရသေးခင် battery အားကုန်သွားတာ မဖြစ်အောင် အားအပြည့်သွင်းထားတဲ့ battery နဲ့ရိုက်ပါ။ Grip တပ်ထားရင်လည်း battery ၂ လုံးစာဆုိုတော့ ပုိုအဆင်ပြေပါတယ်။ နောက်တစ်ခုက ရုိုက်ကူးနေရင်း memory ကဒ်ပြည့်သွားတာ မဖြစ်အောင် ကဒ်အလွတ်တစ်ခု ထည့်ရုိုက်ပါ။ format ပါ ချထားလုိုက်ရင် ပုိုကောင်းပါတယ်။
Battery မလုိုအပ်ပဲ မကုန်အောင် ချွေတာဖုို့အတွက် image review ဖွင့်ထားရင် off ထားပါ။ တစ်ချို့ကင်မရာတွေမှာ auto power off function ပါတာမျိုးရှိခဲ့ရင် disable လုပ်ပေးထားဖုို့လည်းလုိုပါတယ်။ တစ်ခါတစ်ရံ landscape photographer တွေဖွင့်ထားတတ်တဲ့ Long exposure Noise reduction (LR Noise Reduce) ဖွင့်ထားခဲ့ရင် Off ပေးထားပါ။
7) time-lapse ရုိုက်ဖုို့ရာအတွက် shooting menu ထဲက interval timer shooting ကုိုသွားပြီး interval time နဲ့ number of count ကုို set လုပ်ပါ။ ကျွန်တော့် Nikon ထဲမှာကပါပြီးသားမုို့ intervalometer cable မသုံးတာပါ။ ဝယ်ထားပြီးသားလည်း မရှိတော့ ကျွန်တော် cable မှာ set လုပ်တာကိုတော့ မပြတော့ပါဘူး သဘောတရားက အတူတူပါပဲ။
ဒါဆုိုရင်တော့ လုိုအပ်တဲ့ setting အကုန် ချိန်ပြီးသွားပြီမုို့ shutter ကုို နှိပ်ကာ time-lapse စတင်ရုိုက်ကူးနုိုင်ပါပြီ။
*** Making video for time-lapse
ဓါတ်ပုံရုိုက်တာ ပြီးသွားပြီဆုိုတော့ ယခု Post-production (Editing) အပုိုင်းကို ဆက်ရေးပေးပါမယ်။ ဒါကျ လက်တွေ့ပြမှရမှာမုို့ ကျွန်တော် နမူနာပုံတွေလည်း ထည့်ပေးထားပါတယ်။ ပုံတွေမှာလည်း အညွှန်းရေးပေးထားပါတယ်။ နောက်ပုိုင်းကျ LR editing tutorial တွေကုို ဗီဒီယုိုနဲ့လုပ်ပေးမှာမုို့ခဏ စောင့်ပေးပါဦးလုို့တောင်းပန်ပါတယ်။ (ခဏခဏ မေးထားပေးမယ့် မလုပ်နုိုင်သေးလုို့ပါ၊ မခက်ခဲပေမယ့် ကျွန်တော် အချိန်ပေးလို့မရသေးလုို့ပါ) :’(
ပြီးတော့ ယခုပုံတွေက ဒီ tutorial ပြဖုို့အတွက် ၁၀ စက္ကန့်စာ အကြမ်းရိုက်လာတာပါ။ HD က storage နည်းနေလို့ယခင် time-lapse တွေက လုပ်ပြီးတာနဲ့ Raw တွေ ဖျက်ဖျက်ပစ်ရလုို့ မရှိတော့လုို့ပါ။ အဲ့တော့ ယခု tutorial time-lapse video ကုိုတော့ မပြတော့ပါဘူး။ နောက်တစ်ပုိုစ့်မှ youtube ပေါ်က နမူနာ time-lapse တွေ လေ့လာဖုို့တင်ပေးထားပါမယ်။
* Edit in Lightroom
1) ရလာတဲ့ ဓါတ်ပုံတွေကို folder အသစ်တစ်ခု ဆောက်ပြီး ကွန်ပျူတာထဲထည့်ထားပါ။ ပြီးရင် LR ထဲ import လုပ်လုိုက်ပါ။ ပုံတွေရာထောင်ချီပေမယ့် ကိစ္စမရှိပါဘူး… ကျွန်တော်တုို့တစ်ပုံကုိုပဲEdit လုပ်ရင်ရပါတယ်။ ကျန်တာတွေကို အကုန် Sync လုပ်လုိုက်မှာပါ။ ပထမဆုံးပုံ (သုို့) အလင်းအမှောင် စိတ်တုိုင်းကျတဲ့ပုံကုို ရွေးပြီး မိမိ စိတ်တုိုင်းကျ ပြင်ဆင် edit ပါ။ ပြင်ဆင်ပြီးပြီဆုိုရင် ပုံတွေအကုန် Select All (Ctrl + A / Command + A) မှတ်ပြီး ဓါတ်ပုံ ညာဘက် အောက်နားလေးက auto sync ကုို နှိပ်လုိုက်ပါ။ အဲ့မှာ check လုပ်စရာ တစ်ခုပေါ်လာပါမယ်။ OK ပေးပါ။
2) ပြီးရင် file menu ထဲက export လုပ်ပြီး JPEG file တွေကို folder တစ်ခုထဲ save ပေးလုိုက်ပါ။
3) ဒါဆုို LR နဲ့လုပ်စရာ ပြီးပါပြီ။ export လုပ်ချိန်ကုိုတော့ ပုံအရေအတွက်ပေါ်မူတည်ပြီး အတော်ကြာစောင့်ရပါတယ်။ အညောင်းအညာ ဖြေချိန်ရတာပေ့ါ။
* Making video by Photoshop
ဒီအဆင့်မှာ တကယ်တမ်းတော့ Video ပြုလုပ်နည်း မြောက်များစွာရှိပါတယ်။ ပေါ့ပေါ့ပါးပါး ဆော့ဝဲတွေကနေ Adobe Premiere Pro, Adobe After Effect, Final Cut Pro စသဖြင့် နည်းများစွာရှိပေမယ့် ကျွန်တော်ကတော့ လူတို်င်းမှာ အလွယ်တကူရှိပြီး သုံးလည်းသုံးတတ်ကြတဲ့ Photoshop နဲ့ပဲပြုလုပ်ပြပါ့မယ်။ ကျွန်တော့်မှာတော့ Photoshop CC ပဲရှိတာမုို့ ယခင် CS5, CS6 တွေမှာ လုပ်ပုံလုပ်နည်း နည်းနည်းကွဲပြားကောင်း ကွဲပြားမှာမုို့ သည်းခံပေးပါ။ လုိုက်စမ်းလုပ်ကြည့်ရင်း လုပ်တတ်သွားမှာပါ။
1) PS မှာ file menu ထဲက Open ကုိုနှိပ်ပြီး ခုန ဓါတ်ပုံတွေ save ထားတဲ့ folder ကုိုသွားပါ။ ပထမဆုံးပုံကုို select လုပ်ပြီး ဘယ်ဘက်ထောင့်က Option ကုိုနှိပ်ကာ Image Sequence ကုိုအမှန်ခြစ်ထည့်ပေးပါ။ Format မှာ JPEG က ရွေးပြီးသားဆုိုတော့ မလုိုတော့ပါဘူး။
2) Frame Rate ရွေးခုိုင်းတဲ့နေရာမှာ ကိုယ်ထားချင်တဲ့ Frame Rate ရွေးပေးပါ။ ပြီးရင် OK ..
3) Window menu ထဲက Timeline ကုို ဖွင့်ပေးပါ။ (မဖွင့်ရသေးရင်)
4) ဒါဆုိုရင် အောက်က timeline မှာ ဗီဒီယုို ပေါ်နေပါပြီ။ မိနစ်ဘယ်လောက်စာ၊ စက္ကန့်ဘယ်လောက်စာလဲဆုိုတာလည်း ကြည့်လုို့ရပါတယ်။
5) ခုက background audio ထည့်တဲ့အပုိုင်းပါ။ ဒီတုိုင်း time-lapse video ကြီးထက်စာရင် background audio လေးနဲ့ဆုို ပုိုပြီး ကြည့်ပျော်ရှုပျော်ရှိသွားတာပေါ့။ time-lapse video မှာ ရှိတဲ့အချိန်အတုိုင်း ထည့်ချင်တဲ့ audio file ကုို အတိအကျ အရင် ဖြတ်ထုတ်ထားတာ ပုိုကောင်းပါတယ်။ PS ထဲမှာ ချိန်ညှိရ ပုိုလွယ်သွားအောင်ပါ။ ခုက ၁၀ စက္ကန့်စာတွေလုို့ပဲသဘောထားပါမယ်။
6) Audio Track ဘေးနားက ဂီတ သင်္ကေတပုံလေးကို နှိပ်လုိုက်ပြီး Add Audio ကုို နှိပ်ပါ။ မိမိထားချင်တဲ့ အသံဖုိုင်ကုိုရွေးပြီး import လုပ်ပါ။ ဒါဆုိုရင် video နဲ့ audio အပေါ်အောက် ပူးတွဲပြနေပါလိမ့်မယ်။
7) Play သင်္ကေတလေးကို နှိပ်ပြီး ရုပ်နဲ့အသံ ကုိုက်ညီအောင် စိတ်တုိုင်းကျ ချိန်ညှိပါ။
8) အုိုကေပြီဆုိုရင် File menu ထဲက export ကုိုသွားပြီး Render Video ကုိုရွေးပေးပါ။
9) ကျလာတဲ့ box ထဲမှာ မိမိပြင်ချင်တာရှိ ပြင်ဆင်ပြီး (ဘာမှမပြင်လည်းရပါတယ်) Render လုပ်ပေးလုိုက်ပါ။ ဒါဆုိုရင် ကုိုယ်လုိုချင်နေတဲ့ Time-Lapse video တစ်ခု ရလာပါပြီ။ render time ကတော့ video ရဲ့ ကြာချိန်နဲ့ ကွန်ပျူတာရဲ့ performance ပေါ်မူတည်ပြီး အချိန်အနည်းငယ်ပေးရပါလိမ့်မယ်။ အေးဆေးကော်ဖီသောက်ပြီး နှပ်နေနုိုင်ပါပြီ။
10) ဒါဆုိုရင်တော့ time-lapse video တစ်ခု အစကနေ အဆုံး ကိုယ်တုိုင် ဖန်တီးလုို့ရသွားပါပြီ။
Tripod ပေါ်တင်ပြီး အသေထားရုိုက်ကူးရတဲ့ static time-lapse တွေအပြင် timer နဲ့ရှေ့တုိုးနောက်ဆုတ်၊ ဘေးဘယ်ညာ ရွှေ့လျားပြီးရုိုက်ကူးလုို့ရတဲ့ motion gear တွေနဲ့လည်း time-lapse ကုို ရုိုက်ကူးလုို့ရပါတယ်။ အဲ့လုို gear တွေရဲ့အကူအညီနဲ့ဆုိုရင် ရုပ်ပုံတွေက ပုိုပြီး သက်ဝင်လှုပ်ရှားကြည့်လုို့ကောင်းနေမှာပါ။ ဒါပေမယ့် ပုိုက်ဆံပုိုကုန်ပါတယ်၊ ဝယ်ရတဲ့အတွက် :P ကျွန်တော့်မှာလည်း အဲ့ gear တွေမရှိသေး၊ မဝယ်နိုင်သေးတော့ ဒီအပုိုင်းကုိုတော့ လက်တွေ့မရုိုက်ကြည့်ရသေးလုို့ချန်ထားခဲ့ပါ့မယ်။ အဲ့လုို ရုိုက်လုို့ရတယ်လုို့ပဲ information ပေးတာပါ။
တခြားတစ်ခုက Time-lapse တုို့ Star-trials တို့ဆုိုတာ shutter ကို ကြိမ်ဖန်များစွာ အသုံးပြုရလုို့ shutter count တက်စေ (ထိစေ) နုိုင်ပါတယ်။ ဒါကုိုလည်း သိထားရမှာပါ။ အဲ့တာမို့တစ်ချို့ ဓါတ်ပုံဆရာတွေဟာ T-L ကုို သူတုို့ရဲ့ လေ့လာခါစ ကင်မရာအဟောင်းလေးတွေနဲ့ရုိုက်ပြီး အဓိက ကင်မရာကုိုတော့ ရုိုးရုိုး shooting တွေမှာသာ ရုိုက်လေ့ရှိပါတယ်။ တကယ်လုို့ ကုိုယ် camera upgrade လုပ်ဖြစ်ရင်လည်း မိမိကင်မရာအဟောင်းလေးတွေ မရောင်းရက်ရင် အဲ့လုို သုံးလုို့ရပါတယ်လုို့… အကြံပြုရင်း ယခု Post ကုို ဒီမှာပဲ နိဂုံးချုပ်အပ်ပါတယ်။
သူငယ်ချင်းများအားလုံး ဓါတ်ပုံလှလှလေးများ ရုိုက်နုိုင်ကြပါစေ။
သိလုိုတာရှိ၊ မရှင်းတာရှိရင် comment မှာဖြစ်ဖြစ် chat box မှာဖြစ်ဖြစ်မေးထားခဲ့ရင် ကျွန်တော် လုိုင်းသုံးဖြစ်တဲ့အခါ ပြန်ဖြေပေးထားမှာပါ။
ပြီးတော့ ယခု post က ပုံတွေကုိုလည်း ကြည့်ပေးပါ။ ကျွန်တော်ရေးထားတာတွေကို ပုံတွေမှာ ပြန်ရှင်းပြထားပါတယ်။
Posted by Alex Aung at 2:24 AM No comments:
Posted by Alex Aung at 1:51 AM No comments:
Posted by Alex Aung at 6:03 AM No comments:
Posted by Alex Aung at 3:13 AM No comments:
Posted by Alex Aung at 2:38 AM No comments:
Posted by Alex Aung at 5:01 AM No comments:
Mantou 馒头 - Rainbow Donut - မန္တလေးငှက်ပျောပေါင်း - မြန်မာ့ရိုးရာ ကြာဆံသုပ်
(Myanmar Vermicelli Salad)
မြန်မာနိုင်ငံမှာ နေရာဒေသပေါ်မှုတည်ပြီး ကြာဆံသုပ် သုပ်နည်းများ ကွဲပြားသွားကြပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ အခြေခံလေးတွေကတော့ ဆင်ပါတယ်။ မစည်ကိုယ်တိုင်လည်း ကြာဆံသုပ်ကို သိပ်ကြိုက်ပါတယ်။
အချိန်ရလို့ သူငယ်ချင်းအပေါင်းအသင်းများနဲ့ ဆုံလို့ကတော့ အကြောင်းပြချက်မျိုးစုံသုံးကာ
ကြာဆံသုပ်ကျွေးဖို့ပဲ အရင်ဆုံးစဉ်းစားပါတယ်။ မစည်ရဲ့ သုပ်နည်းလက်ရာကို သုပ်စားလို့ရအောင် ပြန်ရှယ်လိုက်ပါတယ်။
• ဆန်ကြာဆံ - ၂ဝဝ ဂရမ် (ရေနွေးဖျောထားပါ)
• ကြက်ဥ - ၃ လုံး (ပြုတ်ပြီး အခွံဖယ်ပြီး အဝိုင်းလေးတွေလှီးထားပါ)
• သခွားသီး - ၂ လုံး (အလုံးလိုက်ရေဆေးပြီး ခြစ်နဲ့ အချောင်းလေးတွေခြစ်ထားပါ)
• ဂေါ်ဖီ - ၅ ရွက် (ခတ်ပါးပါး မျှင်မျှင်လေးတွေ လှီးထားပါ)
• ကြက်သွန်နီ - ၃ လုံး ( ဒေါင်လိုက် ပါးပါးလေးလှီးထားပါ)
• အာလူး - ၃ လုံး (နူးအောင်ပြုတ်ပြီး၊ ပါးပါးလှီးထားပါ)
• ကြက်သွန်ဖြူဆီချက် - လိုသလောက်
• ပူစီနံ - ၁ စည်း (အရွက်ချွေပြီး ခတ်ကြမ်းကြမ်းလေးတွေလှီးထားပါ။ အပင်ရိုးများ ချန်ထားပါ)
• ပဲမုန့်အကျက်မှုန့် - လိုသလောက်
• ပုစွန်ခြောက်မှုန့် - စားပွဲဇွန်း ၂ ဇွန်း
• ငရုတ်သီးအကျက်မှုန့် - စားပွဲဇွန်း ၁ ဇွန်း ခွဲ
• ကြက်သွန်နီကြော် - စားပွဲဇွန်း ၁ ဇွန်း
• ငံပြာရည် - စားပွဲဇွန်း ၁ ဇွန်း
• ပဲငံပြာရည် - စားပွဲဇွန်း ၂ ဇွန်း (ပြုတ်ပြီးသား ကြာဆံနယ်ထားရန်)
• မန်ကျည်းမှည့် - စားပွဲဇွန်း ၃ ဇွန်း
• ငရုတ်သီးဆော့စ် - စားပွဲဇွန်း ၁ဝ ဇွန်း
• သကြားညို - လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ၂ ဇွန်း
• ကြက်သားမှုန့် - စားပွဲဇွန်း ၁ ဇွန်း
• ပူစီနံအပင်ရိုး - ၁ စည်း
• အသီးအရွက်ပြုတ်ရည် - စားပွဲဇွန်း ၅ ဇွန်း
၁။ ရေနွေးဖျောထားသော ဆန်ကြာဆံနူးအိလာလျှင် ရေစင်အောင်ဆန်ခါနှင့်စစ်ပြီး
ပဲငံပြာရည်ဖြင့် နှံ့အောင်ခပ်ဖွဖွလေး လက်နဲ့နယ်ပါ။
၂။ ဇောက်နက်အိုးအသေးလေးထဲကို အသုပ်အချဉ်လုပ်ရန် ပါဝင်ပစ္စည်းများ အားလုံးထည့်ပြီး
မီးမျှင်မျှင်လေးဖြင့် မကြာခဏမွှေပေးပါ။ သကြားပျော်ပြီး အရည်ထိတည်ပါ။ အရည်ပျော်ပြီး
အနည်းငယ် အရည်ခန်းလာလျှင် မီးဖိုပေါ်မှချပြီး အအေးခံပါ။ အေး သွားလျှင် သံဆန်ခါစစ်နဲ့ အရည်စစ်ထားပါ။
၃။ ဇလုံအကြီးထဲမှာ ပါဝင်ပစ္စည်းများအားလုံး ကိုယ့်စိတ်ကြိုက် ထည့်၍သုပ်ပါ။
အပေါ့အငန်အစပ် ဆားမြည်းပြီး လိုတာထပ်ဖြည့်ပါ။ ချက်ချင်းစားပါ။ မုန့်တီ ဟင်းရည်လေးနဲ့ တွဲစားလျှင်အလိုက်ဆုံးပါ။
မှတ်ချက် - တို့ဟူး၊ အကြော်များလည်း ထည့်သုပ်လို့ရပါတယ်။
ဖီးကြမ်းငှက်ပျောသီးကိုအလွယ်တကူဝယ်လို့ မရတဲ့ နေရာကလူတွေအတွက်စမ်းလုပ်ကြည့်ထားတာပါ။ ညီမလေးတယောက်နဲ့ သူငယ်ချင်းတယောက်က သူတို့ နေတဲ့ နေရာမှာ ဖီးကြမ်းမရှိဘူး သီးမွှေးနဲ့ ကောဆိုလို့ လုပ်ကြည့်လိုက်တာ။ သီးမွှေးနဲ့ ပေါင်းတာ က ပိုမွှေးပြီး ပိုချိုတယ်။စားလို့ ကောင်းတယ်။ လုပ်နည်းကတော့တူတူပါပဲ။ သီးမွှေးကပိုချိုတော့ ထန်းလျက်ကိုလျော့ထည့်ထားပါတယ်။ ပြန်တော့ရေးပေးလိုက်မယ်နော်။
၁။ ထန်းညက်အညို - ၅ ကျက်သား
၂။ ကျက်ပြီးသားနွားနို့ - ၁ လီတာ
၃။ သီးမွှေး ငှက်ပျောသီး - ၁၀ လုံး
၅။ အုံးသီးဖတ်- ၁ ခွက်
၆။ ရေ - ၃ လီတာ
၁။ ငှက်ပျောပေါင်းပြုလုပ်မည့် ရေ ၅လီတာလောက်ဆံ့တဲ့ အိုးထဲမှာ ရေ၊ ထန်းညက်၊ ဆားအနည်းငယ်ကို တည်ပါ။ ထန်းညက် နှင့် ဆားအ၇ည်ပျော်သွား၇င် တဖက်က အိုးခံပြီး ရေစစ်နှင့် စစ်ပါ။ ထန်းညက် ထဲမှအမှိုက်များ ပါရင် စစ်သွားအောင်လို့ ပါ။
၂။ စစ်ပြီးသော ထန်းညက်ရည်ထဲတွင် ငှက်ပျောသီးများထည့်ပြီး နာရီဝက်ခန့် မီးအေးအေးဖြင့် တည်ထားပါ။အ၇ည် အ၇မ်းပစ်သွား၇င်ေ၇အနည်းငယ်ထပ်ထည့်ပါ။ ငှက်ပျောသီးများပျော့ပြီး အချိုရည်များဝင်သွားပါလိမ့်မည်။
၃။ အဲနောက် နွားနို့ ကိုထည့်ရ်ျ မီးအေးအေးနှင့်ပဲတည်ပါ။ နွားနို့ ကိုထည့်ပြီးချိန်တွင် နွားနို့ ပွက်လာရင် ဝေကျတက်လို့ ဂရုတစိုက်မွှေပေးပါ။ မလိုင်အဖတ်လေးတွေရလာပါလိမ့်မည်။ လိုချင်တဲ့ အချိုရည် အနေအထားနဲ့ မလိုင်ဖတ်များများရလာချိန်တွင် မီးဖိုပေါ်မှချပါ။
၄။ ငှက်ပျောပေါင်းလေးကိုထည့် အုံးသီးဖတ်ကို အပေါ်က ဖြူး အချိုထက်ကြိုက်ရင် သကြားပါဖြူးပြီး စားနိုင်ပါပြီ။
အခုပေါင်းထားတဲ့ ပေါင်မုန့်လေးကို မန်ထိုလို့လည်းခေါ်ပြီး တရုတ်နိုင်ငံမြောက်ပိုင်းမှာ နာမည်ကြီးပါတယ်။ တရုတ်နိုင်ငံမြောက်ပိုင်းက ဆန်ထက်စာရင် ဂျုံထွက်ရှိမှုက ပိုများတာကြောင့် မန်ထိုပေါက်စီကို အမြဲတမ်း အစားအစာအနေနဲ့ စားသုံးကြပါတယ်။ ဖြူဖွေးတဲ့ ဂျုံနဲ့လုပ်ထားတဲ့ မန်ထိုပေါက်စီတွေက စက်မှုမထွန်းကားခင် တရုတ်ပြည်မှာ အရမ်းကို ဈေးကြီးတဲ့ ပေါက်စီဖြစ်လာပါတယ်။
တရုတ်နိုင်ငံမြောက်ပိုင်းမှာ မန်ထို၊ ဂျုံခေါက်ဆွဲနဲ့ Bing ဆိုတဲ့ ပေါင်မုန့်ကို နေ့စဉ်စားသုံးကြပါတယ်။ တရုတ်နိုင်ငံတောင်ပိုင်းမှာတော့ ထမင်းကို အဓိကထား စားကြပါတယ်။ အဲဒီမန်ထိုပေါက်စီကို ကြက်သွန်မြိတ်၊ ပဲအနှစ်တွေ၊ အစေ့အဆန်တွေ ထည့်ပြီး တစ်ခါတည်းထည့်ပေါင်းလုပ်လာကြပါတယ်။ အကယ်၍ ဘာမှမထည့်ထားဘူးဆိုလျှင် နောက်ဆုံးထွက်လာတဲ့ မန်ထိုကို ထက်ခြမ်းခွဲကာ အသားတွေ၊ အရွက်ကြော်တွေ ထည့်ပြီး စားကြပါတယ်။ အကယ်၍ အသားထည့်ပြီး လုပ်လျှင်တော့ ပေါက်စီလို့ ခေါ်ပါတယ်။
ပေါက်စီဂျုံ - ၂၀၀ ဂရမ်
တဆေး (Yeast) - ၃ ဂရမ်
သကြား - ၃၀ ဂရမ်
ရေ - ၁၀၀ ဂရမ်
အစေ့အဆန်များ - လက်တစ်ဆုပ်စာ (Almond, ဗာဒံ​စေ့ စသဖြင့်)
• ဂျုံမှုန့် - ၁ ၁/၂ ခွက်
• သကြားဖြူရိုးရိုး - ၁/၂ ခွက်
• ဘေကင်ပေါင်ဒါပွဆေး - လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ၁ ဇွန်း
• ထောပတ် (အခန်းအပူချိန်) - စားပွဲဇွန်း ၂ ဇွန်း
(မိုက်ခရိုဝေ့မှာ စက္ကန့်အနည်းငယ် အပူပေးပြီး ပျော်ပါစေ)
• ကြက်ဥ (အလုံးကြီး) - ၁ လုံး (အခန်းအပူချိန်)
• နွားနို့ - ၁/၄ ခွက်
• ဗနီလာအနံ့ရည် - လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ၃ ဇွန်း
• Food Color အရောင်ဆိုးဆေး - နီ၊ ပြာ၊ စိမ်း၊ ဝါ
၁။ အိုးကြီးတစ်အိုးမှာ ဂျုံမှုန့်၊ သကြားဖြူနှင့် ဘေကင်ပေါင်ဒါ ပွဆေးတို့ကို ရောနှောပြီး သမအောင် မွှေပါ။
၂။ နောက်အိုးသေးတစ်အိုးမှာ ကြက်ဥကို ခေါက်ထည့်ပြီး နည်းနည်းရိုက်ပါ။
၃။ နွားနို့နှင့် ထောပတ်ရည်ကို ရောထည့်ပြီး သမအောင် မွှေပါ။
၄။ ဗနီလာအနံ့ရည်ကို ရောထည့်ပြီး သမအောင် မွှေပါ။
၅။ ကြက်ဥနွားနို့ အရောအနှောကို ဂျုံမှုန့်အရောအနှောထဲ လောင်းထည့်ပြီး ဇွန်းကြီးတစ်ချောင်းနဲ့ သမအောင် မွှေပါ။
၆။ မုန့်နှစ်ရည်ကို ခွက်သေး ၄ ခွက်မှာ အညီအမျှခွဲထည့်ပြီး တစ်ခွက်စီကို နီ၊ ပြာ၊ စိမ်း၊ ဝါ အရောင် ၃ စက်စီ (သို့) ကိုယ့်စိတ်ကြိုက် အရောင်ရလာသည်အထိ ထည့်ပြီး မွှေပါ။
၇။ မုန့်နှစ်ရည်အရောင်တစ်မျိုးစီကို အလုံပိတ်နိုင်တဲ့ Zip ပါတဲ့ ပလတ်စတစ်အိတ်ထဲ လောင်းထည့်ပါ။ (နီ၊ ပြာ၊ စိမ်း၊ ဝါ ပလတ်စတစ်အိတ် ၄ အိတ်ရပါမယ်။)
၈။ ထောပတ် (သို့) Cooking Spray သုတ်လိမ်းထားတဲ့ ဒိုးနပ်ပဲန်ထဲ အနီရောင်မုန့်နှစ်ရည်ကို တစ်ကွက်အရင် အညီအညာညှစ်ထည့်ပါ။
၉။ နောက်တစ်ဆင့် အပြာ၊ အစိမ်း၊ အဝါ အစီအစဉ်အလိုက် ညှစ်ထည့်ပါ။
၁၀။ အာဗင်ကို 350˚F (180˚C) ချိန်ပြီး ၁၀ မိနစ် ကြိုအပူ ပေးပြီးလျှင် မုန့်ဗန်းကို ၉ မိနစ် ဖုတ်ပါ။
၁၁။ Donut Pan ကို အာဗင်က ထုတ်ယူပြီး ခဏအအေးခံပြီးလျှင် အဆင်သင့်စားသုံးနိုင်ပါပြီ။
(မှတ်ချက် - Donut ၆ ခု ရပါမယ်။)
တော့ပိုကီး ဆန်မှုန့် ၀က်ဗိုက်အသားပြား ရွှေအပ်မှို နဲ့ ဘာဘီခယူဆော့ (Rice cake, Bacon & Enoki Mushroom with BBQ Sauce)
ကိုရီးယား တော့ပိုကီးကို ကလေး လူကြီး အကြိုက်ဆုံး အရသာနဲ့ တီထွင်ထားတာလေး လုပ်စားကြည့်လို့ရအောင် ရှယ်ပေးလိုက်တယ်နော်..
၀က်ဗိုက်သားပြား ၁၆၀ ဂရမ် (အနေတော် လှီးထားပါ)
ရွှေအပ်မှို ၈၅ ဂရမ်
နှမ်းဆီ ဇွန်း ၁ စားပွဲဇွန်း
ကြက်သွန်ဖြူ ၁ တက် (နူတ်နူတ်စင်းထားပါ)
ဘာဘီခယူဆော့ ဇွန်း ၄-၅ စားပွဲဇွန်း
တော့ပိုကီးဆန်မှုန့် ၁ ခွက်
ငရုတ်ပွနီ၊စိမ်း ခွက် တစ်ဝက် (ပါးပါး ရှည်ရှည်လှီးထားပါ)
Eryngii မှို ၁၀၀ ဂရမ် (ပါးပါး လှီးထားပါ)
နှမ်းနက်စေ့ လက်ဖက်ဇွန်း ၂ ဇွန်း
ကြက်သွန်မြိတ် ၂ ပင် ပါးပါးလှီးထားပါ
၁။ မကပ်သော ဒယ်အိုးထဲ နှမ်းဆီထည့်ပြီး ပူအောင်တည်ပါ။ ဆီပူလျင် ကြက်သွန် ဖြူ နှင့် ၀က်သားပြားထည့်ပြီး အိုးပူပေးပါ။ သေချာနှံ့အောင် မွှေပေးပါ။ အသား အညိုရောင်းသန်းလာလျင် နှမ်းနက် ကလွဲလို့ ကျန်ပါဝင်ပစ္စည်းများ ထည့်ပြီး မွှေပေးပါ၊ ဆန်မှုန့် နူးအိတယ့် အထိတည်ပါ။ ကြက်သွန်မြိတ် များ ဖြူးပြီး ပူပူလေးသုံးဆောင်ပါ။
Posted by Alex Aung at 1:02 AM No comments: